Lahatsoratra nataon'i Austin Rolling ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Austin Rolling
Austin Rolling no mpiara-manorina sy CEO an'ny Outfield. mpandraharaha amin'ny taranaka fahatelo. Nanomboka ny orinasany voalohany, tranokalan'ny lamaody izy, tamin'ny faha-20 taonany. Manana BA amin'ny serasera avy amin'ny University East Michigan izy ary MBA avy ao amin'ny Texas A&M University. Nandany ny ankamaroan'ny asany tamin'ny fiasana amin'ny entan'ny mpanjifa sy ny sehatra IT amin'ny varotra an-tsaha sy ny marketing, ny fitantanana ary ny asa fampandrosoana ny orinasa.
Maninona no tokony hihoatra ny CRM nentim-paharazana ny varotra sy ny varotra eny an-tsaha
Talata, Desambra 10, 2019 Talata, Desambra 10, 2019 Austin Rolling
Arakaraka ny maha-tsy mitombona izao tontolo izao miaraka amin'ny herin'ny haitao - haino aman-jery sosialy, fifampiresahana horonan-tsary, sns. Nisy fotoana iray naneho tena tamin'ny fomba tena izy. Ny foto-kevitra iray izay tonga voajanahary, intuitive ary nisy taloha be dia be toy ny eritreritra aorian'ny famerenana azy dia nafindra ho amin'ny adaptation tsy manelingelina sy lafo kokoa. Ny fahazoana ara-batana eo imason'ny olona tianao hifandraisana. Toa fiheverana miharihary izany, fa ny zava-misy